Iimaphu zikaGoogle sele zibonisa amanqaku okutshaja kwizithuthi zombane | I-Androidsis
Kuba uGoogle uza kuzisa inkonzo yeemephu zikaGoogle, isigebenga sokukhangela sandisa uhlobo lolwazi olusinika lona minyaka le ngendlela yokuba sele kukho abantu abaninzi abayisebenzisa rhoqo ukukhangela iimveliso ezikufutshane nendawo yabo yokuhlala. endaweni yomfunayo.
Kwezi veki zidlulileyo sibonile ukuba uGoogle uyayandisa njani ulwazi olunxulumene nolwakhiwo analo Isitulo esinamavili singena lula, Ulwazi olubaluleke kakhulu kubasebenzisi abakhubazekileyo abanyanzeliswa ukuba bahambe ngale ndlela.
Kwiintsuku zamva nje, ikwaqalisile ukubonisa ifayile ye- Ukutshaja amanqaku ezithuthi zombane kwihlabathi liphela, hayi eUnited States kuphela njengesiqhelo. Kuya kusanda ngokwesiqhelo ukuwela isitalato ngezithuthi zombane, nangona ukwamkelwa kwabo kubasebenzisi kuhamba kancinci kunokuba bekulindelwe, ikakhulu ngenxa yokuba ixabiso labo liphezulu kakhulu kunaso nasiphi na isithuthi somlilo.
Ukuze ukwazi fumana iindawo zokutshaja zezithuthi zombane Kufuneka sibhale "izikhululo zokutshaja" kwibhokisi yokukhangela. Apha ngezantsi, zonke iindawo zokutshaja ezikhoyo kufutshane nendawo esihlala kuyo ziya kuboniswa kunye namandla okutshaja anikezelwa yi-Kw kunye nenani leetshaja ezikhoyo.
Imifanekiso yeendawo zokutshaja kunye nendawo ezikuyo ikwaboniswa ukuze kube lula kakhulu ukuzifumana xa sikufutshane nazo. Uninzi lweetshaja ezikhoyo zezithuthi zeTesla, nangona sinokufumana nazo izitishi zombane ozibiza generic Kwaye abayonxalenye yenkampani kaElon Musk.
Iimephu zikaGoogle sisicelo seGoogle esenza ukuba kufumaneke kubo bonke abasebenzisi ngokupheleleyo simahla Kwaye ukuba awusebenzisi, unokuzikhuphelela kule linki ilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Iimaphu zikaGoogle sele zibonisa amanqaku okutshaja kwizithuthi zombane